Xafiiskeedii ayay gashay. Waxay dhigatay boorsadii, waxayna markiiba furtay koombiyuutarkeedii. Cabbaar ku dhaw shan iyo toban daqiiqo ayay ku qaadatay inay akhrido waxoogay emailo ahaa oo ku sugayay inbox-keeda. Way istaagtay waxaanay aaday xafiiskii James. Markuu arkay ayuu gacanta u taagay isagoo u tilmaamaya inay fadhiisato maadaam uu telefan ku hadlayay. Kolkuu kasoo dhamaaday ayuu […]